तपाईंको छाला गरिरहेको सुरु गर्न पहिलो स्थानमा, तपाईंले आफ्नो जीवन शैली, आहार र स्वास्थ्य ध्यान गर्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो, फोहर rashes र बिल्कुल स्वास्थ्य समस्या र कुपोषण कारण विभिन्न छाला समस्या। लागि कस्मेटिक्स समस्या छाला र उनको विकल्प - यो एक धेरै जिम्मेवारी प्रक्रिया हो। निश्चित तपाईं आफ्नो थाहा छाला प्रकार, यो सुक्खा, तेल, संवेदनशील वा संयोजन हुन सक्छ। छाला प्रकार - एक रोग, सबै फरक छ, त्यसैले यसको संरचना मिलाउने प्रयास छैन, तपाईं बस यसलाई बाह्य stimuli देखि रक्षा गर्न आवश्यक छ।
तपाईंले प्रकार निर्धारण गरेको छ, तपाईं कस्मेटिक्स को चयन गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। तर सही कुरा यस्तो dermatologists, endocrinologists र beauticians चिकित्सा विशेषज्ञहरु, साथ मुद्दा भेट्नुपर्छ गर्न हुनेछ। तिनीहरूले तपाईं आफ्नो समस्याहरूको कारण पत्ता लगाउन र आफ्नो अनुहार को समस्या र तपाईंको छाला को प्रकार को लागि सही मेकअप छनोट अप गर्न मद्दत गर्नेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - धूलो भरा pores देखि शरीर को निरन्तर खुला भाग र तपाईंलाई एउटा विशेष चयन गर्न आवश्यक - आफ्नो अनुहार मा आफ्नो छाला सधैं प्रदूषण गर्न किनभने यो छ, उजागर छ छ कस्मेटिक उत्पादनहरु जस्तै tonics वा शुद्ध पार्नुभएर दूध रूपमा।
तर ठीक कसरी अनुहार हेरचाह गर्न? यो साबुन संग धुनु छैन यो dries र छाला मजबूत किनभने सबै भन्दा राम्रो छ, र तपाईं आवश्यक छैन भनेर। पनि बिहान र साँझ धुने लागि धेरै उपकरण छन्, र आफ्नो छाला को प्रकार को लागि तिनीहरूलाई चयन गर्न भूल छैन। समस्या छाला को लागि एक विशेष कस्मेटिक्स पनि छ। सुक्खा छाला एक व्यक्ति टनिक शुद्ध पार्नुभएर लाभ उठाउन भने रक्सी आधारित, वा तेल छाला संग एक केटी बिहान सुरक्षा बोसो दूध मा अनुहार पुछिदिनुहुनेछ, तिनीहरूले कुनै पनि सान्त्वना को परिणाम हो।
लागि कस्मेटिक्स अनुहार सफाई, तपाईं के आवश्यक छ चयन गर्न - दैनिक हेरविचार, साथै विशेष सफाई धेरै, मुख्य कुरा हो। लागि दैनिक सफाई लाइन निश्चित यसको संरचना मा प्राकृतिक सामाग्री हुनुपर्छ प्राकृतिक पदार्थ, उदाहरणका लागि, अर्क, tinctures, जडीबुटी र हर्बल निष्कर्षों समावेश गर्नुपर्छ।
एक धेरै राम्रो समाधान नियमित बारेमा वा एक पटक दुई पटक एक अनुहार मास्क गर्न एक हप्ताको छ। किनभने यसले pores मा गहिरो भित्र पस्नु र शुद्ध गर्न मद्दत गर्छ पर्छ, र विशुद्ध रासायनिक संरचना को मामला मा, यो मात्र हानि, तपाईंको छाला मा मर्मज्ञ गर्न सक्नुहुन्छ मइस्चराइजिंग वा सफाई लागि प्रत्येक मास्क, नरम र प्राकृतिक आधार हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, यो खूबानी र आलुबखडा pits को अर्क आधारित लैवेंडर निकाल्ने, chamomile आधारित सफाई दूध, वा मास्क लगाएको एक टनिक हुन सक्छ। आफ्नो समस्या समाधान गर्न प्राकृतिक सामाग्री यी सबै साधन। तेल छाला लागि कस्मेटिक्स तपाईं परिणाम मजबूत गर्न आवश्यक हुनेछ।
छाला समस्या - यो मात्र महिला टाउको दुखाइ छ, तर मानिसहरू अक्सर छाला रोगबाट ग्रस्त छ। लागि पुरुष कस्मेटिक्स माग पनि अनुहार, र त्यहाँ मानिसहरू छाला हेरविचार लागि कस्मेटिक्स निर्माण गर्ने कम्पनीहरु छन्। यो पनि Scrubs को एक किसिम हुन सक्छ शुद्ध पार्नुभएर दूध tonics समस्या छाला र अन्य प्रसाधन।
प्रभाव एकदम सजिलै देखिने हुनेछ जब ब्यूटिशियन भ्रमण र सफाई अनुहार प्रक्रियाहरु पकड को PERIODICITY - सारांश, हामी मात्र दुवै पुरुष र महिला को चिन्ता भनेर भन्न सकिन्छ।
आफ्नो सफा र राम्रो-groomed छाला सामग्री हुन र सही मेकअप चयन!
बाल डाई दिशा: प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देश
पहिले र पछि बनाउन-अप शक्ति। बनाउन-अप सबै परिवर्तन हुनेछ!
सबै भन्दा राम्रो जग जो छ? छनौट cosmetologists जग मा समीक्षा र सल्लाह
मास्को मा Lefortovo पार्क
आय र संगठन को खर्च को विश्लेषण - यो कम्पनीको रणनीतिक योजना एउटा महत्त्वपूर्ण भाग
"काँस सिंह" - विज्ञापन तिहार को मुख्य पुरस्कार
Oleg Cassini: चलचित्र को भूमिका, छोटो जीवनी
के प्रयोग: "सोडियम क्लोराइड" Dropper?